November 06, 2017 Posted by Jhilko.com
२० कात्तिक, काठमाडौँ । जापान सरकारको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका छ स्थानमा भूकम्प मापन गर्ने एक्सेलोमिटर केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२को भूकम्पपछि जापान सरकारले नेपाललाई काठमाडौँ उपत्यकामा १० वटा एक्सेलोमिटर केन्द्र र उपत्यका बाहिर १० वटा जिपिएस केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गरेको थियो । सोहीअनुसार साँगा, कपन, लुभू, सिनामंगल, थानकोट र खरिपाटीमा एक्सेलोमिटर केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको भूकम्प मापन केन्द्रका भूकम्...बाँकी
पहिलो पटक रोबोटलाई नागरिकता दिइयो
October 27, 2017 Posted by Jhilko.com
सोफिया नाम गरेकी रोबोटलाई साउदी अरबले नागरिकता दिएको छ । सोफिया पहिलो नागरिकता पाउने रोबोट बनेकी छन् ।रियादमा आयोजित ‘फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट इनिसिएटिभ’ मा सोफियालाई साउदी नागरिकता प्रदान गरिएको घोषणा गरिएको थियो। रियादमा भैरहेको फ्यूचर इन्भेस्टमेन्ट नामक सम्मेलनमा वक्ताको रुपमा सहभागी भैरहेकी छिन् । यो सम्मेलनमा आधुनिकिकरणका लागि लगानी बढाउने विषयमा चर्चा हुँदैछ । बेलायती अभिनेत्री अड्री हेपबर्न र रोबोट निर्माता डेविड ह्यान्सनकी पत्नी सोफियाको रुपमा आधारित यो रोबोटले ‘हट सो...बाँकी
के हो एब्स्योलुट जीरो ?
September 21, 2017 Posted by Jhilko.com
मोहनकुमार दाहाल एब्स्योलुट जीरो या पूर्णतया रित्तो (नथिङनेस) के हो ? हिन्दूहरुले विश्वलाई शून्यको अवधारणा दिएका हुन् । शून्यको आविष्कारले गणित र विज्ञानमा नयाँ –नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न मद्दत ग¥यो । प्रविधिको विकासमा पनि यसको योगदान निर्विवाद छ । ब्रम्हाण्डको सृष्टि महाविस्फोट भन्ने गरिएको बिग ब्याङबाट भएको आधुनिक विज्ञानको धारणा छ । बिग ब्याङभन्दा अघि समस्त ब्रम्हाण्ड सिंगुलारिटीमा थियो । ब्रम्हाण्ड एउटा अणु भन्दा पनि अरबौं अरब गुणा सानो स्वरुपमा रहेको वैज्ञानिक...बाँकी
यस्तो छ नयाँ सौर्यमण्डल
September 18, 2017 Posted by Jhilko.com
ज्ञानमित्र तीन महिना अगाडि अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) ले पत्रकार सम्मेलन गरी हामो ज्ञात सौर्यमंडल भन्दा बाहिर अर्को एउटा सौर्यमंडल पत्ता लगाएको घोषणा गर्यो । नासाका अनुसार यो पत्ता लागेको नयाँ सौर्यमंडल झन्डैझन्डै हाम्रो सौर्यमंडलकै प्रारुपमा छ । यस सौर्यमंडलको नाम ट्रैपिष्ट सौर्यमंडल राखिएको छ। यसको मातृतारा ट्रैप्पिस्ट–१ हो हाम्रो सूर्यजस्तै। हामी बसोबास गर्ने ‘मिल्की वे’ नामक आकाशगंगाको एउटा अर्को सदस्य सूर्य अथवा तारा। सूर्यबाट टैप्पिस्ट–१ को दूरी ३९.५...बाँकी
फेसबुक म्यासेन्जरबाट भाइरस फैलिँदै !
September 07, 2017 Posted by Jhilko.com
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेजिङ एप फेसबुक म्यासेन्जर मालवेयरको सिकार भएको छ । म्यासेन्जरमा भाइरस भेटिएपछि फेसबुक च्याटमा रमाउनहरुलाई भने सचेत हुनुपर्ने भएको छ । फेसबुक च्याट म्यासेन्जरमार्फत अहिले भाइरस र मालवेयर फैलिइरहेको छ । फेसबुक म्यासेन्जरको माध्यमबाट भाइरसको लिङ्क फैलिरहेको क्यासपरस्की ल्याबले जनाएको हो । ल्याबको रिपोर्टका अनुसार म्यासेन्जरमा भाइरस भएको लिङ्क साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिले पठाएको भेटिएको हो । फेसबुक म्यासेन्जरको माध्यमबाट भाइरसको लिङ्क फैलिर...बाँकी
अबदेखि चीनीयाँ इन्टरनेट
काठमाडौं । चीनबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले बताए अनुसार चीनतर्फको क्षेत्रमा विभिन्न कारणले फाइबर काटिने लगायतका समस्या रहे पनि अहिले दुवै देशको फाइबर जोडिसकिएको छ । चिनीयाँ इन्टरनेटको सफल परीक्षणपछि मात्र टेलिकमले यसलाई व्यावसायि क रूपमा उपयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो प्रक्रिया पूरा भएसँगै यसअघि भारतमा मात्र निर्भर इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात अन्त्य हुनेछ । नेपाल टेलिकमले एक वर्षको अवधिमा २ अर...बाँकी
August 21, 2017 Posted by Jhilko.com
५ भदौ, काठमाडौँ । अब दृष्टिविहीनले पनि छापाको सामग्रीलाई सहजरुपमा उपयोग गर्न सक्ने भएका छन् । दृष्टिविहीनका लागि सुनेर जानकारी लिन सक्ने तथा ब्रेल लिपिमा अध्ययनसमेत गर्न सक्ने सफ्टवेयर अप्टिकल रिकग्निसन सफ्टवेयर ९ओसिआर० प्रयोगमा आएपछि नेपालमा पहिलोपटक दृष्टिविहीनले सार्वजनिक सूचनामा पहुँचसमेत पाएका हुन् । विश्व नेत्रहीन युनियनका अनुसार नेपालजस्ता विकाशोन्मुख देशमा जम्मा एक प्रतिशत छापाका सामग्रीमा मात्र दृष्टिविहीनको पहुँच रहेको छ । नेपाल नेत्रहीन सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्...बाँकी
सूर्यमा प्वालपरेकोले पृथ्वी अन्धकार र भुउपग्रह प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी
July 14, 2017 Posted by Jhilko.com
सूर्यमा एक विशाल कालो छिद्र (प्वाल) देखापरेको र यसले पृथ्वीसम्म तातो ज्वालाहरु फ्याँक्नसक्ने, केही दिन पृथ्वीमा अन्धकार (ब्ल्याकआउट) हुनसक्ने र भू–उपग्रह सन्चारप्रणाली नै ध्वस्त हुनसक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिएका छन् । वैज्ञानिकहरुले सूर्यअस्तको समयमा खिचेको तस्वीर एआर–२६६५ अनुसार एकलाख २० हजार किलोमिटर फराकिलो उक्त कालो छिद्र जुन पृथ्वीभन्दा ठूलो रहेको समेत बताएका छन् । डेलिमेलकाअनुसार वैज्ञानिकहरुले उक्त छिद्रबाट खतरनाक ‘एम क्लास’को सौर्य ज्वालाहरु उत्पाद...बाँकी
July 07, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि (काउखालि) आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तै कम्प्युटर प्रणालीमा जाने भएको छ । लि कम्प्युटर प्रणालीमा गएपछि उपत्यकाका जुनसुकै कार्यालयबाट पानीको महसुल तिर्न सकिनेछ । साउनदेखि नै लिमिटेडका ‘मिटर रिडर’ ले पनि प्राधिकरणले जस्तै स्थलगत रुपमै ‘बिलिङ’ गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रवक्ता सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । “छ महिनापछि घरमा मिटर रिडर ‘बिलिङ’ गर्न गएका बेला &lsq...बाँकी
टेलिकमका फोन ह्याक गर्ने धम्की
काठमाडौं । कहिलेकाहिं ढाँटेको कुरा दुःख दिन्छ । प्रविधिको विकासले दुनियाँलाई जति साँघुरो बनाएको छ त्यसको दुरुपयोग गरियो भने दुनियाँलाई ध्वस्त पार्न सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि र प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । नेपालमा पनि भर्खरै त्यस्तै एउटा घटना घट्यो । एक जना युवकले ’नेपाल दूरसञ्चारको सबै डाटा मसँग सुरक्षित छ । म जतिबेला पनि नेपाल टेलिकममको फोन ह्याक गर्न सक्छु’ भन्दै नेपाल टेलिकममा धम्कीपूर्ण फोन गरे । नेपाल टेलिकमको प्रधान कार्यालय भद्रकालीमा आइतबार कार्यालय खुल्ने बित्तिकै फोनमा घण्टी...बाँकी